Waa maxay Adobe Camera RAW Super Resolution | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
El Ereyga xallinta sare wuxuu horey u lahaan karaa boos naqshaddan mahad Adobe Markaad bilaabayso, tiknoolajiyaddan casriga ah ee ku saleysan malaayiin sawirro ah waxba ma qabanayso taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka tagto sawir 10MP ah oo aad u qaadatid 40MP midna adigoon si faahfaahsan ama af leh u lumin.
Sidii ay sixir u ahayd, tan Waxyaabaha cusub ee Adobe ayaa laga soo qaatay Adobe Camera Raw oo ku jira Photoshop oo mar dhow ayey u imaan doontaa codsiyada kale sida Lightroom iyo Lightroom Classic. Waxaan ku sharaxeynaa wax yar kor ku xusan waxa uu yahay Adobe Super Resolution.
1 Waa maxay Adobe Super Resolution
2 Hadda su'aasha: runti ma waxaan u baahanahay pixels badan?
3 Sidee Super Resolution u shaqeeyaa
4 Sida loo isticmaalo Super Resolution
Waa maxay Adobe Super Resolution
Eric Chan ayaa mas'uul ka ah mashruuca Super Resolution ee la fuliyay iyo in aan horay ugu haysannay Photoshop iyada oo loo marayo Camera Raw. Waxaan soo qaadaneynaa maareeyaha mashruuca ee ugubkan oo horey uga shaqeyn jirey Photoshop isagoo fulinayey astaamo cusub sida: Hooska iyo Muuqaalka, Hufnaanta, Sawirada Kaamirada ama Saxida Lens iyo mashaariicda kale. Shaqadiisii ​​Photoshop waa la arki karaa markanna wuu nagaga yaabin doonaa ugubkan cusub.
Xallinta sare lafteeda ayaa iyaduna ah mashruuc pixel ah, sida uu sheeganayo, laakiin nooc kale ah. Wuxuu sifiican u cadeeynayaa asaga oo dhigaya tusaale sawir hore oo aan leenahay 10MP waxaa qaaday kamarad qaraar yar oo daabacan. Oo hadda qiyaasi inaad haysato hawl "zoom dijitaal ah" oo horumarsan si aad u weyneyso mowduuca sawir noocaas ah.
Waana tan cusub inay ka timaaddo muuqaal ah oo la sii daayay 2 sano ka hor: Faahfaahinta La Kordhiyay, iyo inay u adeegsato Barashada Mashiinka inay isku dhexgaliso faylasha ceyriinka leh darajo aaminnimo ah, taasoo ka dhalanaysa faahfaahin fiiqan oo leh waxyaabo aad u yar.
Taasi waa Xallinta sare runtii waa wejiga labaad ee mashruucaas taasna waxaa loola jeedaa habka lagu hagaajinayo tayada sawir iyadoo la xoojinayo ama la hagaajinayo xallinta muuqata.
Dhammaantiin waad ogtahay in ballaadhinta sawirku ay ka dhigayso inay soo saarto faahfaahin mugdi ah, laakiin Super Resolution wuxuu awood u leeyahay inuu ku yareeyo iyaga nooca barashada mashiinka horumarsan ama Mashiinka Barashada Mashiinka oo lagu tababaray malaayiin sawiro ah. Sidaa darteed Super Resolution waxay awood u leedahay inay si caqligal ah u weyneyso sawirada iyadoo la ilaalinayo geesaha nadiif ah lana ilaalinayo faahfaahinta ugu muhiimsan.
Hadda su'aasha: runti ma waxaan u baahanahay pixels badan?
Way cadahay markasta oo aan haysanno kaamirooyin ka fiican iyo maxaa Markuu mid awood u lahaa soo saarida sawirro 6MP ah ayaa umuuqday in kabadan inta kufilan. Laakiin markaa kuwii 12MP ayaa noqday kuwii hore ee "6MP", haddana 24-ka ayaa ah kuwii hore 12. Taasna looma xuso kamaradahaas oo ka socda 40 illaa 100MP hal sawir ah.
Jawaabta, sida Chan sheega, maxaa dhacaya haddii aan runtii u baahanahay pixels badan, waa mid fudud: mar mar dabcan haa. Haddii aan u qaadno goobta sawir qaadista ee aaladaha moobaylka, waxaan horeyba u helnay qayb awood u leh inay qaaddo 12MP sawirro ah. Caqli ahaan, sawirrada qaar, adoo adeegsanaya Adobe Super Resolution ayaa noqon kara ku dhowaad muhiim ah Ballaarinta sawir leh zoom dijitaal ah si loo siiyo taabashadaas fiiqan waa mid ka mid ah tusaalooyinkaas.
Sida ka soo kabsan sawiro sanado ka hor aan ku qaadanay kamarad tayo hoose leh, wuxuu dib noogu soo celinayaa sida ay u anfacayso muuqaalkan cusub ee ay soo bandhigtay shirkadda 'Chan' ee 'Adobe' leh Adobe.
Chan wuxuu ku egyahay muujinta sida sawirkan aan ku dhajineyno in goosashada uu joogi doono 2.5MP oo uu doonayo inuu daabaco, iyadoo Super Resolution uu u rogi karo 10MP si uu u qaato si uu u daabaco una dhigo mid diyaarsan. Waxaa jira tusaalooyin badan oo aan maskaxda ku hayno shaqadan Super Resolution oo aad horey u isticmaali karto haddii aad leedahay Creative Cloud oo aad ku cusbooneysiisay Adobe Photoshop leh Camera Raw.
Sidee Super Resolution u shaqeeyaa
Michaël Gharbi iyo Richard Zhang oo ka socda shirkadda Adobe Research ayaa wax ka qabtay horumarka ee xudunta Super Resolution. Fikraddu waxay ka timid tababaridda kumbuyuutar malaayiin lammaane ah oo sawirro hooseeya iyo kuwa xallinta sare leh, si markaa kumbuyuutarku u fahmo sida habboon ee loo weyneeyo sawirrada xallinta hoose leh oo faahfaahsan.
Tani waa tusaale taas:
Bar kumbuyuutar si aad wax uga barato sawirro aad u tiro badan, sida Chan uu leeyahay, waxay la mid tahay sida cunug wax loo baro: waxaad tusaysaa isaga qaab dhismeed dil ah waxaadna ku biirineysaa malaayiin sawirro ah tusaale ahaan. Go'aanka 'Super Resolution' qaab dhismeedka aasaasiga ahi waa ayaa loogu yeedhay «shabakad neural neural convolutional neural», taasina waa hab qabow oo loo dhaho waxa ku dhacaya pixel waxay kuxirantahay midka ku xiga. Tababarkani wuxuu qaadan karaa maalmo ama xitaa toddobaadyo.
Sida loo isticmaalo Super Resolution
Midig u guji sawir ama xajin dheer Furaha xakamaynta adoo gujinaya
Xullo Kobcin ... ka soo qaad meeniska macnaha guud
In In kor loo qaado daaqadda aragtida, calaamadee sanduuqa 'Super Resolution'
Hada dhagsii hagaajinta
Xoogaa sug intaad xisaabinta samaynaysid iyo feyl cusub oo ceyriin ah ayaa lagu soo saari doonaa Dijital Dijitaal ah oo ay ku jiraan sawirka la hagaajiyay
Hadda waad wax ka beddeli kartaa sawirkaas sida kuwa kale
Waa runtaa Xalinta Super waxay leedahay xaddidaadkeeda maaddaama sawirradu ay ku kooban yihiin 65.000 pixels iyo 500 Xildhibaan. Haddii aad isku daydo inaad ku dalbato sawir leh lambarradaas qalad ayaa ku siin doona.
Waxaan ku soo lifaaqaynaa a tusaalooyin taxane ah oo ku saabsan sida horumarka loo gaaro iyo in ay yihiin kuwo cajiib ah:
Waa a qaab iyo xoojin kaas oo sidoo kale ka shaqeeya JPEGs, PNGs, iyo TIFFs, sidaa darteed waxaad haysataa xorriyad dhan inaad ku horumariso nooc kasta oo sawirro ah oo leh sheeko cusub oo ku jirta Photoshop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Waa maxay Adobe Camera RAW Super Resolution: U Beddelo Sawirada FullHD illaa 4K